5 Mitambo uye zvinoshandiswa zvemahara kana zviri kutengeswa kurodha pasi izvozvi | IPhone nhau
5 Mitambo uye zvinoshandiswa zvemahara kana zviri kutengeswa kurodha pasi izvozvi
Pakati pevhiki, tinokuunzira sarudzo nyowani ye yemahara mitambo uye maapp kana pakutengesa kunyangwe, ngatizvitarisei, nhasi zvinhu zviri zvemitambo.
Usakanganwa kuti zvese zvinopihwa zviripo inoshanda kwenguva shoma. Naizvozvo, tinokurudzira kuti uzvitorere nekukurumidza sezvazvinogona kuti iwe ugone kutora mukana wekutora. Totanga here?
1 Nyeredzi Mapapiro: A space adventure
4 Brutal Labyrinth Goridhe
5 Dudziro Yakareruka
Nyeredzi Mapapiro: A space adventure
Isu tinotanga yedu sarudzo yemahara mitambo ine space space, "Star Wings: A space adventure", mutambo wauchazotandadzwa nawo zvakanyanya uye nekutenda kwayakamirira kusvika kupera kwevhiki kunonyanya kutakura.
"Nyeredzi Mapapiro: Chinoitika chinoshamisira" iri puzzle-yakavakirwa mutambo mauri waunofanira kutarisana ne "rima simba" iro rinotarisira kukunda zvakasikwa zvese. Kuti uite izvi iwe unofanirwa kukunda mamishini makumi mana munzvimbo dzakasiyana, kugadzirisa mapuzzle kuvandudza ako spaceships.
Addictive uye inonakidza, "Star Wings: A space adventure" mutambo unokodzera kune vese vasina kujaira uye vakapindwa muropa nevatambi. Mutengo waro wenguva dzose ndeye 3,49 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Isu tinoenderera mberi ne «Mabhandi», mumwe muropa mutambo unoenderana nekugona kwako kuchengetedza mwero uye kugona kwako kukunda maburi, makore eutsi uye zvipingamupinyi zvakawanda kuwedzera. Uye zvakare, sezvaunofambira mberi kuburikidza nemutambo, kumhanya kunowedzera uye pamwe nako, kuoma. Nekudaro, "Mabhanhire" anova mutambo unodzvinyirira unozoita kuti iwe upedze maawa pamberi pe iPhone yako, kana kuikanda kunze kwehwindo rehasha. Zviri kwauri!
"Mabhanhire" ane mutengo unowanzoitika we1,09 euros, zvisinei izvozvi unogona kuzviwana mahara zvachose.
Uye isu tinoenderera mberi nemutambo uyo wevanamakanika vanozozivikanwa kune ruzhinji rwenyu mese. Iyo "Blockis Pro", a block mutambo nema mechanic akapusa asiwo muropa kwazvo, zvichibva paTetris inozivikanwa, asi nekumwe kunakidzwa kugadziriswa nekuti pano une mhando nhatu chete dzemablock, ivo vacharamba vari yakatwasuka kana yakatwasuka yakatarisa, zvisinei, hauzokwanise kuitenderedza seTetris, uye hauzokwanisi kuzvifambisa kusvika vadonhera pasi. Uye zvakadaro, iwe unofanirwa kupedzisa mitsara kuti ivo vanyangarika uye iyo skrini haina kuzadzwa nemablock.
"Blockis Pro" ine mutengo unowanzoitika we1,09 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Brutal Labyrinth Goridhe
Ngatiendei neyechina yemahara mutambo! Mune ino kesi iri «Brutal Labyrinth Goridhe», mutambo unoitika pa maze yakasarudzika. Basa rako richava rekutyaira bhora kwarinoenda kwekupedzisira, asi nekuda kweizvi uchafanirwa kunzvenga zvakawanda zvezvipingamupinyi zvizere nekuputika nemoto. Uye sezvaunosimudza, kuomarara uye kuoma zvichawedzera, uye iwe uchawana zvipingaidzo zvitsva uye zvakaoma zvekukunda
"Brutal Labyrinth Goridhe" inopa maawa uye maawa ekurwisa Gameplay kuburikidza 50 matanho ekuoma mauri uchafanirwa kugona kuyedza kumhanya kwako, kugona kwako uye kunyangwe kugona kwako kunonzwisisika kurerekesa yako iPhone kuti ishandise bhora.
"Brutal Labyrinth Goridhe" ine mutengo unowanzoitika we1,09 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Uye saka hazvitaurwe kuti mukati IPhone nhau Isu tinongofunga zvekunakidzwa, tinopedzisa iyi sarudzo yemitambo uye kunyorera zvemahara kana kutengeswa nechishandiso chakakura chevafambi, vadzidzi uye, kazhinji, kune chero mushandisi. Iyi «Dudziro Yakareruka», chirongwa icho, sekuratidzwa kwazita rayo, chinobvumidza dudzira zvinyorwa pakati pemitauro makumi matatu nemaviri zvakasiyana. Iwe unogona kuteedzera idudziro nekamwe tap uye kunyange anokwanisa kukuverengera iwo mavara akashandurwa.
Mitauro yakatsigirwa inosanganisira chiArabic, chiBasque, chiCatalan, chiChinese uye chiChinese (chetsika), chiRungu, chiFrench, chiGerman, chiItari, chiGreek, chiJapanese, chiRussia, chiSpanish, nezvimwe.
"Easy Dudziro" ine mutengo unowanzoitika we10,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana pahafu yemutengo.
Dudziro -Easy Dudziro9,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 5 Mitambo uye zvinoshandiswa zvemahara kana zviri kutengeswa kurodha pasi izvozvi
Isu takaedza iyo Aukey SK-M8 mutauri akakodzera kutora chero kupi